Isbeddellada Suuqgeynta: Sare u kaca Danjiraha iyo Abuure Era | Martech Zone
2020 aasaas ahaan waxay bedeshay doorka warbaahinta bulshada ay ku leedahay nolosha macaamiisha. Waxay halbawle u noqotay asxaabta, qoyska iyo asxaabta, goob loogu talagalay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed iyo xarun loogu talagalay dhacdooyinka isdabajoogga ah iyo qorshaynta munaasabadaha iyo isu-imaatinnada.
Isbeddeladaasi waxay gundhig u noqdeen isbeddellada dib u qaabeyn doona adduunka suuqgeynta warbaahinta bulshada sannadka 2021 iyo wixii ka dambeeya, halkaasoo ka faa’iideysiga awoodda danjirayaasha sumaddu ay saameyn ku yeelan doonto xilli cusub oo suuq-geyn dijitaal ah. Akhriso fikradaha ku saabsan sida aad u eegi kartid u-doodayaasha qiimaha sare, taageerayaasha, iyo kuwa raacsan inay ku farsameeyaan istiraatiijiyad suuq-geyn dijitaal ah oo dhab ah oo saameyn ku leh astaantaada.
Isbedellada 1: Mawduuc Sax ah oo garaacaya Waxyaabaha Studio-Soo-saaray
In kasta oo warbaahinta bulshada ay noqotay xarunta suuqgeynta sumadda, haddana waa maaddo dabiici ah oo dhinaca ugu sarreysa gaarsiinta macaamiisha, gaar ahaan goorta marka la barbar dhigo xayeysiinta.
At Greenfly, waxaan aragnay sida ugu wanaagsan ee habkan xaqiiqada-koowaad u tarjumeysa guud ahaan noocyo kala duwan oo warshado ah iyo dhufto. Kooxda Biden ee loogu talagalay kooxda ololaha Madaxweynaha waxay ka heleen tijaabooyinkooda gudaha in xayeysiisyada siyaasadeed ee dhaqameed - si xirfad leh loo soo saaray, muuqaal jilicsan oo 30-ilbiriqsi ah - ay aad uga waxtar yar yihiin impromptu, muuqaalada ka dambeeya muuqaallada ee cod-bixiyeyaasha iyagoo adeegsanaya taleefannadooda casriga ah ama kamaradaha internetka si ay ula wadaagaan xiisaha codbixinta
Guddiga Qaranka ee Dimuqraadiga ah waxay sidoo kale u jeesteen wakiilladooda si ay ereyga uga helaan marinnada bulshada iyo dijitaalka ee ku saabsan hagitaankooda doorashada ee 2020, oo ay ku jiraan Madaxweynihii hore ee Mareykanka iyo xiisaha codbixinta Barack Obama iyada Waan Codaynayaa olole.
Codkaaga waligiis ma tixgalin wax kabadan inta hada hada jirta.
Maanta waa Maalinta Diiwaangelinta Codbixiyeyaasha Qaranka. Tag https://t.co/XdZz4dh82T in la diiwaangaliyo oo la sameeyo qorshe lagu codeeyo. Hubina in qof kasta oo aad taqaanid uu sameeyo, sidoo kale. pic.twitter.com/ItarX1d4zw
Waxyaabaha saxda ah waxay u shaqeeyaan si la mid ah heerka macaamiisha. Tusaale ahaan, kooxda bulshada ee jimicsiga jimicsiga Waan jeclahay laadadka waxay awood u yeelatay inay cusbooneysiiso oo ay kala soocdo astaantooda si ay uga jawaabaan dhaqsaha isbeddelka, suuqa maxalliga ah xaaladaha COVID-19 iyadoo la soo ururinayo cusbooneysiinta nuxurka ee ay duubteen in ka badan 100 ka mid ah maareeyayaashooda istuudiyaha maxalliga ah ee ku baahsan Waqooyiga Ameerika. Iyo ShiraacanGP si guul leh loogu biiriyay ciyaartoydii doonta ku safrayay adduunka oo dhan si ay ula wadaagaan waxyaabaha laga soo qabtay kaamirooyinka jirka inta lagu guda jiro tartamada
Qoraal ay wadaagaan SailGP (@sailgp)
Taxana 2: Taageerayaashu Maaha Kuwa Raaca - Waxay Ka Mid Yihiin Kooxdaada Hal-abuurka ah
Taageerayaasha ayaa noqonaya abuurayaal tayo leh (erey dadka qaar door bidaan saameynta) naftooda. Inkastoo qaar isticmaale-soo saare nuxurka wali waxaa abaabulaya astaamo, ma jirto hab fiican oo lagu dhiirrigeliyo wax soo saar marka loo eego wicitaanka khibradaha dhabta ah ee dadka dhabta ah.
Intii lagu gudajiray safka faafa, oo aan lahayn faashad faashad saxan, the Los Angeles Dodgers Horyaalkii taxanaha ahaa ee 'MLB World Series' ayaa ku baaqay dabaaldeg farsamo ah. Kooxda dhijitaalka ah ee kooxda ayaa isu soo uruurisay in ka badan 3,500 oo taageereyaal ah si ay ugu soo gudbiyaan fiidiyowyadooda falcelinta xilligan horyaallada iyaga oo adeegsanaya Greenfly, oo ay ku soo ururiyeen muuqaal fiidiyoow baraha bulshada ah.
Waan dabaal degnay. Waan ooynay. Waan guuleysanay. #Dhammaan pic.twitter.com/U3nLivNz7K
Ololahani wuxuu kooxda u oggolaaday inay meel fog ka soo qabtaan dhammaan tamarta jawaabaha taageerayaasha dabaaldega ah oo ay ku jiraan kuwa ugu dhiirrigeliya u ololeeya guusha.
Isbedel 3: Warbaahinta Bulshadu Waa Arena Cusub Oo Lagu Kordhiyo Qiimaha Wadaagga
Iyadoo la xirayo dhacdooyinka adduunka ugu badan ee 2020 iyo kor ku xusan ee saameynta dhijitaalka ah ee xudduudaha, bulshada ayaa hadda noqotay mid muhiim u ah muujinta lammaanaha ROI iyo ka caawinta buuxinta farqiga dakhliga. Xaqiiqdii, warbaahinta bulshada ayaa ka mid ahayd wadiiqooyinka ugu suuq geynta suuq geynta dhaqaajiso kafaalashooyinka sanadihii ugu dambeeyey.
Wada-hawlgalayaashu waxay sii kordhayaan dalbashada caddayn dheeraad ah oo ku saabsan soo noqoshadooda maalgashiyadooda iyo aragti dheeraad ah oo ku saabsan sida ganacsigooda looga caawiyo warbaahinta bulshada. Ururadu waxay ku helayaan qiimahaan iibka tooska ah, hogaaminta iibka cusub, wacyigelinta calaamadaha la ballaariyey iyo dhiirrigelinta wax soo saarka cusub.
Sida lagu xusay inta lagu gudajiray kooxdii Joornaalka Ganacsiga Isboortiga ee dhowaan, taxanaha asalka ah ee Major League Baseball, On First With Pete Alonso, oo uu soo bandhigay Gatorade, wuxuu ku xiray astaanta cabitaanka isboortiga taageerayaasha baseball qaab dabiici ah oo ka socda horyaalka YouTube channel.
Qiimaha kafaala-qaaduhu wuu sii dheereyn karaa xitaa si loo kaxeeyo is-beddel bulsho oo macno leh. Kooxda cricket-ka Rajasthan Royals waxay bilaabeen a ku ololeyn la gasho nadaafadaha nadaafadda ee NIINE Hindiya gudaheeda, halkaas oo dhaleeceyn dhab ah ay ku xiran tahay xilliyada. Intii lagu guda jiray tartankii IPL dhowaan, XNUMX waxay siisay sagaal gabdhood seddex bilood oo gogol-xaashi ah oo fayadhowr oo loogu talagalay socod kasta oo dhibco ah, wadar ahaan 186 orod iyo 1,674 gabdhood.
Qoraal ay wadaagaan Niine (@niineindia)
HADDII AY DHAMMAAN
Xaqiijin, oggolaansho dhab ah, iyo walxo cayriin ah ayaa had iyo jeer garaaci doona xayeysiisyada lagu qasbay. Xallinta waxyaabaha ay soo saaraan taageerayaasha ayaa u oggolaan doona noocyada inay abuuraan ololeyaal awood leh oo ka dhex gooya dallacaadaha xayeysiinta ee duugoobay. Waxay ka dhex muuqan doonaan kuwa la tartamaya iyaga oo codsi ballaaran u diraya la-hawlgalayaasha isla markaana, marka la eego, fiiri qiimaha baraha bulshada ee dakhliga.
Tags: advertisingSafiirkasax ahxaqiiqdabarack obamabidenCOVID-19abuurahakooxda kirikitkaguddi qaran oo dimuqraadi ahdncqirashadawaxyaabaha ay soo saaraan taageerayaashataageerayaasharaacsangatoradecagaaranWaan jeclahay kickboxingWaan codeyn doonaaInstagramMagaalada Los Angelesbaseball-ka ugu weynisbeddelada suuqgeyntaMLBniinemarka hore Pete alonsoQoyska reer Rajasthanshiraacxafaayadaha nadaafaddawarbaahinta bulshadakafaalashojoornaalka ganacsiga isboortigaTwitterMacmiilka la soo saarayyoutubeYouTube channel
Tom Kuhr waa hawl fuliyaha suuq geynta istiraatiijiga ah oo leh taariikh ballaaran oo ku saabsan suuq geynta dijitaalka, howlaha dakhliga, iyo warbaahinta bulshada. Isagu waa halyeey ka soo bilaabmay shirkado badan oo guuleystey wuxuuna gacan ka geystey kor u qaadista raasamaalka, dhisida kooxo heer caalami ah, iyo abuurista suuq-geyn la kobcin karo iyo barnaamijyo horumarineed ganacsi oo awood u siisay kobaca degdegga ah. Sida CMO loogu talagalay Greenfly, wuxuu si dhow ula shaqeeyaa isboortiga, warbaahinta, noocyada macaamiisha, iyo xayeysiisyada si otomaatig loogu sameeyo loona cabbiro barnaamijyada suuqgeynta u doodista ee xoogga leh. Iyaga oo matalaya codka macaamilka, alaabada abaalmarinta ku guulaysatay Tom iyo khibradaha macmiilka ee aan caadiga ahayn waxay horseed u noqdeen bixitaanno badan oo guuleysta iyada oo loo marayo IPO iyo helitaan.
Sida loo iibsado Magaca Domain
Python: Script A Google Autosuggest Extract of Trends for your Niche Keywords Keywords: Isweydaarsiga 'Google Autosuggest Extract of Trends for your Miski Search Keywords'